शिक्षा Archives – Satabdi News
काठमाण्डौमा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई विद्युतीय चुल्हो दिने
१० फाल्गुन, काठमाण्डौ । सरकारले विद्यार्थीलाई विद्युतीय (इन्डक्सन) चुल्हो बाँड्ने भएको छ। दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रबाट अध्ययनका लागि काठमाण्डौमा बसेका विद्यार्थीका लागि विद्युतीय चुल्हो वितरण गरिने भएको हो । काठमाण्डौमा आई स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले चुल्हो वितरण गर्नेछ। अतिदुर्गम, पिछडिएका क्षेत्र र अन्य क्षेत्रलाई
१६ मंसिर, काठमाडौ । संयुक्त विद्यार्थी संगठनद्दारा करारमा रहेको प्राध्यापकलाई स्थाई बनाउने देउवा सरकारले गरेको निर्णय प्रती गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छ्न । कार्तिक १४ गते त्रि.वि सभा बैठकले १० वर्ष देखि करारमा रहेको जनशक्तिलाई स्वत: स्थाई गर्ने निर्णय प्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो। देशमा असंख्य काविल प्रविधिमैत्री
किराबी संघको २३ औं स्थापना दिवसमा नुलाम बिमोचन
१७ भदाै, काठमाडौ । "पहिचान र संघीय शिक्षा प्रणाली लागू गराैँ, किरात स्वायत्त राज्य निर्माण गर्न गाउँ नगर लागाैँ !" भन्ने मुल नारासहित किरात राई विद्यार्थी संघले २३ स्थापना काठमाडौको मण्डला नाटकघर, अनामनगरमा मनाएका छ्न । किरात राई विद्यार्थी संघले आफ्नो स्थापना दिवसको अबसरमा १२ औं अंक 'नुलाम' मुखपत्रको विमाेचन
फौजदारी कानून समाजको प्रथम बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
१२ भाद्र, काठमाडौ । फौजदारी विधिशास्त्र र कानूनको क्षेत्रमा बिशेषज्ञता हासिल गरेका र फौजदारी विधिशास्त्र, फौजदारी न्याय तथा कानूनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउदै आईरहेका एवं सो बिषयमा कानून ब्यवसाय, अनुसन्धान, अध्यापन, न्यायसम्पादन र उक्त क्षेत्रको विकासको निम्ति क्रियाशिल व्यक्तिहरूको साझा मञ्चको रूपमा रहेको फौजदारी कानून समाजको प्रारम्भिक तथा प्रथम बार्षिक
किरात राई यायोक्खाद्धारा कक्षा ११ र १२ को लागी ७१ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान
१० भाद्र, काठमाडौं । किरात राई यायोक्खा संस्थाले किरात राई विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । यायोक्खाले शैक्षिक सत्र २०७८–७९ का लागि पुर्ण तथा आंशिकमा छनौट भएका एसइई उत्रिण भएका ७१ जना विधार्थीहरुलाई कक्षा ११ र १२ अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति वितरण गरिएको हो । किरात राई यायोक्खा, शैक्षिक बिभागका प्रमुख
सुशील विके २५ असार, काठमाडौ । दलित समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएको जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अन्त्यका गर्नका लागि राज्यको मुख्य जिम्मेवारी हुने वक्ताहरुले वताएका छन् । जातिय विभेद विरुद्ध विश्व मञ्च, ग्लोवल फोरमले आयोजना गरेको विभेद उन्मुलनमा राज्यको भूमिका विषयक भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वोल्दै वक्ताहरुले सवै किसिमका विभेद अन्त्यका
लोहोरुङ राई भाषाकाे पाठ्यपुस्तक तयार
२४ असार, काठमाडौ । संखुवासभाको तीनवटा स्थानीय तहका सरकारी विद्यालयहरुमा मातृभाषा शिक्षाको रुपमा लोहोरुङ राई भाषा लागू गर्नका लागि कक्षा १ को पाठ्यपुस्तक ‘लोहोरुङ’ निर्माण गरिएको छ । लोहोरुङ राई समाजले निर्माण गरेको पाठ्यपुस्तक संखुवासभास्थित खाँदबारी नगरपालिका, सभापोखरी गाउँपालिका र चिचिला गाउँपालिकाका विद्यालयहरुमा लागू गरिनेछ । लोहोरुङ राईहरुको मुख्य बसोबास
रोकिएका त्रिविका सबै परीक्षा यसै वर्ष हुने : विद्यार्थीले रोजेको केन्द्रमा परीक्षा
१२, असार, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका)ले रोकिएका सबै परीक्षा यस वर्ष नै गर्ने भएको छ। कोरोना भाइरसका कारणले पनिकाले परीक्षाको क्यालेन्डर नै खल्बलिएपछि पनिकाले यस वर्ष रोकिएका सबै परीक्षा सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको हो। परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले गत वर्षदेखि रोकिएका सबै परीक्षा यसै वर्ष सकेर
यमकुमारी ददेल ( अधिबक्ता ) मोबाईलको घण्टी बज्यो । मेरी आमाको फोन रहेछ म : हेलो ! आमा : शुभ–आशिर्वाद ! नानी घर कहिले आउने ? म : छिट्टै आउछु । आमा : कहिले छिट्टै ? म : झट्टै आउछु के आमा ...! यसरी नै अलिबेर कुरा भएपछि ‘म कार्यक्रममा
बैशाख ३०, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तह प्रथम वर्ष र स्नातकोत्तर तह दोस्रो वर्षको परीक्षा आवेदन र रजिष्ट्रेशन फारम भर्ने समय अनिश्चिकालका लागि स्थगित गरेको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि परीक्षा आवेदन फारम र रजिष्ट्रेशन फारम भर्ने समय स्थगित गरेको